Otu esi eme ka ụgbọ ala dị jụụ n'oge ọkọchị-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Otu esi eme ka ụgbọ ala dị jụụ n'oge ọkọchị
Mgbe oge ọkọchị bịara, ụgbọ ala ahụ ga-enwute anyanwụ na-achasi ike, ozugbo ị banyere n'ụgbọala, ọ dị ka ịbanye sauna, ọ dịkwa ka ịsa sauna. Iji zere ihere a, taa, m ga-eso gị kọọrọ gị ọtụtụ ụzọ iji belata okpomọkụ dị n'ụgbọ ala ngwa ngwa.
Esịtidem na mpụga mgbasa imekọ ihe ọnụ
1. Mepee ọnụ ụzọ na windo, chere 2-3 nkeji ka ikuku na-ekpo ọkụ wee gwụ, ma bido ụgbọ ala ahụ;
2. Gbanwuo ntụgharị nke mpụga nke ikuku ikuku;
3. Mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị n'ime na n'èzí nke ogige ahụ yiri, mechie windo ma mee ka mgbasa dị n'ime.
A na-ejikarị usoro a eme ihe, ma ọ dịkarịa ala minit 5 iji nweta mmetụta ahụ. Ọ bụ ezie na nke a dị ntakịrị ọkụ na mbido, ọ na-ezere ibu gabigara ókè mgbe injin ahụ malitere, na igwe nrụgide nke ikuku nwere ike ịbanye ngwa ngwa ọnọdụ kachasị mma.
Ekwesiri ighota na oburu na eji ihe eji aghari n'ime ya ogologo oge, ikuku oxygen nke ikuku n'ime ugbo ala ga - ebelata, na gas ndi na - emebi ihe dika carbon monoxide nke engine na - ezighi ezi nwere ike gbakota na ugbo ala. . Ya mere, ọ dị mkpa ịgbanwee ọnọdụ mgbasa ozi mpụga na oge iji mee ka ụgbọ ala Fresh ikuku si n'èzí na-efe.
Mepee ma mechie ụzọ
1 Mepee windo nke onye na-anya ya;
2. Mepee ụzọ nke onye ọkwọ ụgbọala;
3. Mepee ma mechie uzo ndi ọkwọ ụgbọ ala ugboro ise na ike nkịtị.
Onye prọfesọ aerodynamics nke Japan chọpụtara ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe iji belata okpomọkụ dị n'ụgbọ ala karịa 8 Celsius C. Principlekpụrụ bụ ịmịkọrọ ikuku oyi n'ime ụgbọ ala site na windo nke onye na-akwọ ụgbọala meghere, wee hapụ ikuku dị ọkụ ụgbọ ala site na imeghe na imechi ọnụ ụzọ nke onye ọkwọ ụgbọ ala.
Naanị ya chọrọ ike nkịtị iji mepee ma mechie ọnụ ụzọ ahụ, ọnụ ọgụgụ nke oge mmeghe na mmechi ga-abụ ihe karịrị ugboro 5 iji nweta mmetụta ahụ. Usoro a dị mfe, na mmetụta dị jụụ doro anya.
1. Gbanwee ihe ngwọta na mmiri na mmanya 10: 1;
2. opening mepechaa ọnụ ụzọ, tụgharịa na windo ma gbanye ihe ngwọta n'ime ụgbọ ala.
Ta mmanya na-aba n'anya ekwesịghị ị tooụbiga mmanya ókè, na oke ịgba ya ekwesịghị ibu oke, ma ọ bụghị na a ga-enwe ihe egwu nchekwa. N'otu oge ahụ, mepee windo ma gbanwee ntụgharị ikuku elu mgbe agbanyere ikuku ikuku. Ebe ọ bụ na ikuku oyi dị arọ karịa ikuku na-ekpo ọkụ, ọ ga-emikpu na-akpaghị aka. Ọzọkwa, mmanya na-egbu egbu na-agbanwe agbanwe, na-agbanwe agbanwe na-ekpokwa ekpo.
Nkwadebe mgbe ị na-adọba ụgbọala
1. Gbalịa ịpasa ụgbọ ala ahụ n’ebe dị jụụ, ma ọ bụrụ na enweghị osisi, ọ kachasị mma ihu anyanwụ mgbe ị na-eche anwụ, ka ịbelata anwụ n’anwụ dị ka o kwere mee.
2. Ojiji nke sunshade enweghị ike ọ bụghị naanị igbochi ọnọdụ okpomọkụ dị n'ụgbọala na-ebili ngwa ngwa, mana ọ na-egbochikwa ihe ndị dị na ụgbọ ala ahụ ịka nká n'ihi ụzarị anyanwụ.
Previous: Ihe ịrịba ama 7 tupu ụgbọ ala mebie
Ọzọ: Otu esi amata mmejọ ụgbọ ala site na mkpọtụ ụgbọ ala